Mashoko zvebhaibheri iri youprofita / Mutsvene akapomera zvikuru saka kune yedu, "anofanira" gurgle uye bvudzi pamisoro yedu kumukazve.
Kunyange vaKristu vazhinji, kunyange rumutsiriro vatendi akapoteredza, mubvunzo zvinosuruvarisa yeBhaibheri rakavimbika. Asi ichi ndicho chiziviso kuti uzere nokutenda muBhaibheri zvakazarurwa naMwari wechokwadi. Kwekanguva isu kutora uye kuongorora zvimwe makuru kumaonero cheBhaibheri ouprofita, nokuti izvi zvakawanda nokusunungura kazhinji kutenda nezuva kuzorwa zvakaipa masimba pakunamata uye ari pamberi hwemazuva matambudziko multifarious, saka zviri kanenge kwandiri. Hapana nguva ikozvino kurasikirwa chivimbo muBhaibheri. Kusiyana, inguva kutora kutenda kwakadzama uye mupenyu. Sei? Zvakanaka, zvino ndiyo nguva yokuti shoko rouprofita zvakatonyanya zvichazadziswa. Teverai magwaro 1 Gen 2: 10-14 uye John 19: 33-34:
"Kubva muEdheni, zvakanga sorwizi kuzodiridza munda, uye ipapo yakapatsanurwa kuva namatavi mana makuru. wokutanga zita The ndiro Pishon. It ndiye runopoterera nyika yose yeHavhira, pane ndarama. Ndarama yenyika iyoyo yakanaka; pane yaitaridzika reonikisi. Rerwizi rwechipiri ndiGihoni. It ndiye runopoterera nyika yose yeKushi. Rwizi rwechitatu ndiye Tigirisi. It ndiye runoyerera kumabvazuva kweAsiria. The rwizi rwechina ndiYufuratesi. "-" Asi vakati vasvika pana Jesu uye vachiona kuti atofa, havana kuvhuna makumbo ake. Pane vachiomerera mumwe murwi kukwira rutivi rwake nepfumo, pakarepo kukabuda ropa nemvura. "
Panguva pakati penyika
Tine vaviri mimwe mienzaniso, ndiri kubva kunzvimbo kutaura pano, asi isu vasina zivo chii vakasvika kucharevei jogirafi uye upenyu paNyika. Wokutanga izvi raiva Ishe (anenge makore 1400 BC) akamisa zuva uye mwedzi nguva pashure muranda wake "munyengetero" Joshua ouprofita (Joshua 10: 12-13): "Pazuva apo Jehovha akapa vaAmori mu Israel mhirizhonga Joshua akataura naJehovha pamberi pavaIsiraeri vose, 'Sol mira paGibhiyoni, uye mwedzi, muna Ajalons mumupata!' uye zuva rikamira, nomwedzi ukarambirapo, kusvikira rudzi rwazvitsivira vavengi varwo. "
The Chiitiko vaviri "muchadenga", vaya vanotungamirirwa wechipiri vanosarudza-mweya kukosha Nyika yayo hunhu - kunyange zviri vauye uchapupu nesayenzi zvisingaiti - zvinonzi muna 2 Madzimambo 20: 8-11 uye zvakaitika 6-700 remakore f.Kr:. "uye (mambo) Hezekia akati kuna (muprofita) Isaiah'Vad ndicho chiratidzo chokuti Jehovha achandiporesa uye kuti ndichakwira kuimba yaJehovha 'Zvino Isaya said'Detta? chichava chiratidzo kuna Ishe kuti Ishe achaita zvaakavimbisa: (. mambo Ahazi kuti chaishandiswa kucherechedza rangu) vachatitaka (nguva) mumvuri kufamba nhanho gumi (h) mberi kana zvichaita kuenda gumi matanho (h) shure? Hezekia said'Det zviri nyore kuti mumvuri (nguva) kuti mitaro inegumi mberi. Kwete, regai pane kufamba gumi matanho (h) Geri. 'Muprofita Isaya akadana kuna Jehovha,
Eya, musana vaviri njodzi / mutongo anoita nemigumisiro yose kuti unogona kuona zvisaririra enyika nhasi.
Chokutanga "mafashamo" vakarurama yaNoa nguva, anenge 2400 apfuura BC (1 Eksodho 7: 17-20, 24, 9: 18-19): "The rwizi panyika mazuva makumi mana uye mvura akasimuka vakasimudza areka kuitira kuti akasimuka pamusoro penyika. Mvura nokukurumidza uye akamuka pamusoro penyika, uye areka aiyangarara pamusoro pemvura. Uye mvura yakapararira kubva zvakawanda pamusoro penyika, kusvikira yazadza makomo marefu ose pasi pedenga. Gumi namashanu (anenge 7.5 metres, kubhiti maererano ekare pfungwa dzaona kuti ruoko murume akura, akacherechedza rangu.) Pamusoro misoro ruva mvura, uye makomo akaputirwa ... Uye mvura akamira pamusoro penyika mazuva zana nemakumi mashanu ... vanakomana vaNowa vakabuda muareka (paGomo Ararat, akacherechedza yangu.) vaiva Shemu, Hamu naJafeti. Hamu ndiye baba vaKanani. Ava vatatu ndivo vaiva vanakomana vaNoa, uye kwavari vane wose munyika akatambanudza. "
The njodzi yechipiri kana naMwari mutongo chiito, kwakaitika panguva apo mhuri yacho oukuru kubva vaNoa vanakomana vatatu anonzi Shemu, tateguru wevaHebheru (ebréerna), akanga achishingaira (uyewo pamusoro 2,000 f.Kr). Muna 1 Gen 10: 21-25 vakaisawo Danho: "Vanakomana vaShemu: Eramu (Persia / Iran miniti, akacherechedza.), Aripakishadhi, naRudhi naAramu. Vanakomana vaAramu vaiva: Uzi, Huri, Geteri uye naMashi. Aripakishadhi akabereka Ebheru (saka nokudaro ebréer / Hebrews, rangu akacherechedza.). Naizvozvo zvinonzi: "Ebheri akaberekerwa vanakomana vaviri. Reumwe raiva Peregi (VaH. Kugoverana), nokuti mazuva ake nyika yakakamurwa. "
. 1 1 Genesisi 1: 19-10 inoratidza kuti Mwari pakubata kwake okusika vaiita mvura uye nyika yakaoma, "Mwari said'Vattnet pasi pedenga ngaiunganidzwe panzvimbo imwe, uye pasi pakaoma anova synligt 'Mwari akatumidza pasi pakaoma kuti Nyika, uye mvura muunganidzwa akadana makungwa. Mwari akaona kuti zvakanga zvakanaka. "Maererano neBhaibheri, saka, paiva pakutanga zvakawanda dzisinganayi dzoga, asi nyika yakanga guru kuroorwa uye makungwa dzakatorwa yoga. Asi sei kuti mativi pamwe kuti tine vanopfuura kondinendi kuti riripo? Zvakanaka, muna 1912 akatsiva muzvinadzidzo wokuGermany, Alfred Wegener, kuti pane imwe nguva kunge 'makondinendi' kufamba ". Kubva nyika yose pakutanga akaturikwa, paiva dzinongoitika chiitiko se "vakarambana" ivhu gobvu iri mumakondinendi maviri. Kuburikidza kuongorora pamwe yeAtlantic kumabvazuva nokumavirira nemiganhu, akawana zvikonzero zvakasimba zvicherwa umambo, chirimwa umambo uye mhuka umambo, kuti makondinendi vaviri inofanira kamwe kunge akabatana - uye kuongorora kuchangobva kuitwa hakuna disproved Pfungwa zvose (Chokwadi pamwe akasiyana mumamirire ekunze panyika) pakutanga kuisa pamwe chete. Munhu anogona kudzidza Mahombekombe izvi pamepu yenyika, uye ona kuti zvingaita here kuti auye navo pamwe chete, sezvinoita dambanemazwi, kana sezvakaita micheto ronda inokura zvachose. Chii chakaita tinoverenga vaEbheru, mwanakomana waPeregi (VaH Kugoverana.): ". Munguva yake nyika yakakamurwa" In kutsanangura Bhaibheri 1861 reshanduro P Fjellstedt ndima iyi, kuti nyika akawira "pasi". Chaiva "disintegration" kwenyika manyorero sei mutauro nevakawanda asati rawa "zvidimbu". Munhu anogona kudzidza Mahombekombe izvi pamepu yenyika, uye ona kuti zvingaita here kuti auye navo pamwe chete, sezvinoita dambanemazwi, kana sezvakaita micheto ronda inokura zvachose. Chii chakaita tinoverenga vaEbheru, mwanakomana waPeregi (VaH Kugoverana.): ". Munguva yake nyika yakakamurwa" In kutsanangura Bhaibheri 1861 reshanduro P Fjellstedt ndima iyi, kuti nyika akawira "pasi". Chaiva "disintegration" kwenyika manyorero sei mutauro nevakawanda asati rawa "zvidimbu". Munhu anogona kudzidza Mahombekombe izvi pamepu yenyika, uye ona kuti zvingaita here kuti auye navo pamwe chete, sezvinoita dambanemazwi, kana sezvakaita micheto ronda inokura zvachose. Chii chakaita tinoverenga vaEbheru, mwanakomana waPeregi (VaH Kugoverana.): ". Munguva yake nyika yakakamurwa" In kutsanangura Bhaibheri 1861 reshanduro P Fjellstedt ndima iyi, kuti nyika akawira "pasi". Chaiva "disintegration" kwenyika manyorero sei mutauro nevakawanda asati rawa "zvidimbu".
asi mutumwa waJehovha akanga kudziviswa panguva yokupedzisira uye akuvara rakanga pachinzvimbo negondohwe / a "mbudzi" uyo akavanamatira musoro / nyanga ari mumiti (1 Eksodho 22: 11-14). Ndizvozvo!
Kana isu zvino tora nesu Ezekieri 46 uye 47 uye kudzidza uprofita, kubvira ipapo, kuzadzika mumazuva anouya, zvichida nenguva yedu, vanenge vari kuuya eMillennial umambo hwaMwari - sezvo rinoti muna 46: 19-20: " uye iye ( "ngirozi-murume") akauya neni napamukova, akanga ari parutivi rwesuwo, mumakamuri matsvene akagadzwa avapristi akatarira kurutivi rwokumusoro, uye ndakaona kuti paiva nenzvimbo kure kumavirazuva (kureva kumavirira , chinyorwa wangu.). Akati kuna me'Detta ndiyo nzvimbo vapristi kubika chemhosva chezvivi uye apo vachaita kubika chezviyo vasina ndokuatakurira kunze rwokunze uye nokudaro kuti vanhu heligt. ' "
Ngatiteererei kumbomira kuti apo muJerusarema (yakare nzvimbo weEdheni / reIdheni) uye funga kuKarivhari akanga nourefu iyo Jesu akatambura rwechibayiro rufu zvedu. Zvakanaka, ichava kubva kumabvazuva (zvishoma kumaodzanyemba) kuverengwa - nepagedhi guta, uye nepagedhi temberi zvishoma kumavirira kuti. Tinongova "musoro nzvimbo" (kumavirira?) MuEdheni nezvinyorwa, apo kuwa chakaitika panguva "muti wokuziva zvakaipa zvakanaka" uye apo "muti woupenyu" ikamira. Zvadaro sei Abrahamu pamusoro Moria inonyanyoshandiswa nzvimbo (zvishoma kuchamhembe kwakadziva kumadokero munzvimbo asati akavaka guta reJerusarema) rinogadzirirwa kubayira Isaka. Kuwedzera kune izvi ndiyo nguva vanofungidzirwa -. Murimi guru Arunas vakatengesa paburiro Soromoni, iyo anovaka temberi yomuJerusarema yokutanga pamusoro huru yepaIndaneti (chinhu kuchamhembe kwakadziva kumadokero), apo vapristi 'vanofanira kubika chemhosva uye chechivi " Pakupedzisira, muna Countdown ichi, kutambura Jesu pamuchinjikwa rufu muJerusarema "musoro anofanira nenzvimbo," reKarivhari (yakafanana chinouraya pfungwa), chinhambwe kuchamhembe kwakadziva kumadokero temberi neguta. Shure kwaizvozvo, kuvigwa Jesu, chinhambwe (45 m) pazasi akavigwa muguva, uye yavose sezvavakatarirwa zvino sei rinoti shure muEdheni, mumunda nzvimbo / Edheni. Maererano muJudha tsika, Talmud, Adhamu akavigwa panzvimbo ino, uye pane netsika dzechiKristu kunyanya hunorondedzera Karivhari pachikomo pamwe chaAdhamu dehenya muguva pasi muchinjikwa. Asi kuti muvadzivirire pane Bhaibheri: "Panzvimbo Jesu pamuchinjikwa, paiva nebindu, uye mubindu mune guva idzva apo hapana akanga dzichigere kuteyiwa. Ikoko vakaradzika Jesu, nokuti waiva zuva rokugadzirira ravaJudha, uye sezvo guva raiva pedyo "(Johani 19: 41-42).. Shure kwaizvozvo, kuvigwa Jesu, chinhambwe (45 m) pazasi akavigwa muguva, uye yavose sezvavakatarirwa zvino sei rinoti shure muEdheni, mumunda nzvimbo / Edheni. Maererano muJudha tsika, Talmud, Adhamu akavigwa panzvimbo ino, uye pane netsika dzechiKristu kunyanya hunorondedzera Karivhari pachikomo pamwe chaAdhamu dehenya muguva pasi muchinjikwa. Asi kuti muvadzivirire pane Bhaibheri: "Panzvimbo Jesu pamuchinjikwa, paiva nebindu, uye mubindu mune guva idzva apo hapana akanga dzichigere kuteyiwa. Ikoko vakaradzika Jesu, nokuti waiva zuva rokugadzirira ravaJudha, uye sezvo guva raiva pedyo "(Johani 19: 41-42).. Shure kwaizvozvo, kuvigwa Jesu, chinhambwe (45 m) pazasi akavigwa muguva, uye yavose sezvavakatarirwa zvino sei rinoti shure muEdheni, mumunda nzvimbo / Edheni. Maererano muJudha tsika, Talmud, Adhamu akavigwa panzvimbo ino, uye pane netsika dzechiKristu kunyanya hunorondedzera Karivhari pachikomo pamwe chaAdhamu dehenya muguva pasi muchinjikwa. Asi kuti muvadzivirire pane Bhaibheri: "Panzvimbo Jesu pamuchinjikwa, paiva nebindu, uye mubindu mune guva idzva apo hapana akanga dzichigere kuteyiwa. Ikoko vakaradzika Jesu, nokuti waiva zuva rokugadzirira ravaJudha, uye sezvo guva raiva pedyo "(Johani 19: 41-42).. uye netsika dzechiKristu kunyanya hunorondedzera Karivhari chikomo pamwe chaAdhamu dehenya muguva pasi muchinjikwa. Asi kuti muvadzivirire pane Bhaibheri: "Panzvimbo Jesu pamuchinjikwa, paiva nebindu, uye mubindu mune guva idzva apo hapana akanga dzichigere kuteyiwa. Ikoko vakaradzika Jesu, nokuti waiva zuva rokugadzirira ravaJudha, uye sezvo guva raiva pedyo "(Johani 19: 41-42).. uye netsika dzechiKristu kunyanya hunorondedzera Karivhari chikomo pamwe chaAdhamu dehenya muguva pasi muchinjikwa. Asi kuti muvadzivirire pane Bhaibheri: "Panzvimbo Jesu pamuchinjikwa, paiva nebindu, uye mubindu mune guva idzva apo hapana akanga dzichigere kuteyiwa. Ikoko vakaradzika Jesu, nokuti waiva zuva rokugadzirira ravaJudha, uye sezvo guva raiva pedyo "(Johani 19: 41-42)..
Uyezve, zvino Ezekieri 47: 1-2: "Zvino vakauya (" ngirozi murume ", akacherechedza wangu.) Me kudzokera uye imba (tembere) pasuo, tarisai mvura zhinji ichibuda pasi (temberi) pachikumbaridzo kumabvazuva (vakananga Gethsemane, reMiorivhi uye weKidroni, akacherechedza wangu.), nokuti imba (tembere) mberi rakatarira kumabvazuva uye mvura ikatanga pasi imba (tembere) rwezasi, kumaodzanyemba kweatari. Ipapo akandibudisa nenzira yokugedhi rokuchamhembe uye akanditungamirira nzira kunze pasuo rokunze, rakanga rakatarira kurutivi rwamabvazuva. Ikoko ndakaona mvura they gush kubva kurutivi rwezasi (rakananga Dead Sea, akacherechedza yangu.). "Tinoverenga pano pamusoro hunyambiri simba (nayo inokwira ichibva pasi pechikumbaridzo kurutivi rwamabvazuva, uye inoyerera kubva kurutivi kwakadziva kumabvazuva). Ko yekare 'nzizi' kunobva 'sezvo ichi ichierera uye zvakare, zvakanaka kubva jebusiten Arauna / Orinani murimi guru wekare "paburiro"?
'Rivers' mabviro '
/ Ndapota kudzidza zvose zviri muBhaibheri kuti Jorodhani (mvura yaro kuti zvinorehwa akawanda), uye Kutarira payo chiedza ano matongo ujpptäckter. /
Asi zvino, pakutanga aiyangarara nzizi kubva mumativi ose mana yeEdheni zvakakwana, saka kuti nharaunda yose Saka vakatsva kwazvo unodiridzwa. Ini kufungidzira "tsime" uye matavi, chakaonekwa kubva kumusoro, sezvinoita chishambwe / muchinjikwa. Upflow pakati, uye ipapo mana nenzizi akatarisana mirayiridzo. Kuchavawo tanga uye simba rouprofita anoyemurika muna Jesu uye mana eEvhangeri nezvake. MATTHEW, imwe pfungwa iri vechiJudha vanhu ruponeso. Mark, mune hunokosha kutendeuka pakati Romans. Luke, vakapiwa rumutsiriro pakati nevaGiriki. Uye John, nechinangwa zvakawanda panguva kuchengetedza kutenda nomumwe vakatenda kare. Uye zvinofanira kuzivikanwa kuti vaya - zvisinei paraiitwa kusati ruponeso kwaKristu, vakafira kutenda kwayo - ndohwavo zvikuru. Naizvozvo kubvisa dzose: "In Ivava vose vakafira murutendo, vasina kugamuchira zvakanga zvavimbiswa. Asi ivo vachiona kure vakazvikwazisa nayo vakareurura kuti vaeni nevapfuuri panyika. "(VaHebheru 11:13) Mune tsika chaAdhamu dehenya vakavigwa pasi pamuchinjiko weKarivari Christian, ichi kunoratidzwa ropa inoyerera muna hova maviri kubva pamuchinjikwa pamusoro - pasi guva reimba uye pasi "dehenya", iro zvino kumirira vose vaya vakafira murutendo, kumutarisira, kuti aizokunda nyoka uye kubayirwa chivi.
Nokufamba vaiimba vazhinji pakati vanhu kutenda sezvizvi nezvaJesu: "Ini kuona muShoko rake mufananidzo wakanaka ..." (Victory Toner 567 v 2). Uye mumwe okutanga mifananidzo rouprofita iri / kure / Jesu - anokwezva mumwe - ndeyokudzidza mvura inoyerera mubindu reEdheni. Jesu ndiye tsime chitsvene roupenyu, ndiye kuroverwa chokwadi paKarivhari, ichiyerera uye kubva pane "kutenda tsime" mana "maoko" - izvo zvinova zvitubu zviduku / hova, pamwe nerimwe kugamuchira Jesu muupenyu hwake . Mumusangano nomukadzi weSamariya, Jesu akati (Johani 4:14): ". The mvura yandichamupa ichava chitubu maari nemvura inodzutukira kuupenyu husingaperi" Pane imwe nguva iri mutambo wamatumba, Jesu akasimuka akadanidzira (Johani 7 : 38-39b): " 'Kana munhu ane nyota, ngaauye kwandiri amwe! Ani naani anotenda kwandiri, sezvazvakarehwa muRugwaro anoti, kubva mudumbu make dzichaerera dzemvura mhenyu. 'Uyu wakati noMweya, iyo vaizogamuchira vaitenda maari "Jesu akatuma vadzidzi pamwe" mvura mhenyu "mukati, pamwe upwelling panobva achikwakuka zvizere chokubuda -. Iye akaratidza kuti vaienda iyi yose nyika, kumativi ose uye micheto (Mateu 28: 18-20, Mabasa 1: 8). No nzvimbo arangarira chakakomba asvika, hapana vanhu vorudzii hazviiti kupa vhangeri - ". Mwari akanga ari muna Kristu achiyananisa nyika (yose) nyika pachake" nokuti (2 VaKorinde 5:19)
Cf. Cross iri mirayiridzo reKarivhari mana. Kubva Jesu, musimboti kuverengwa, ipapo uende shoko kuna ose mirayiridzo: kumabvazuva, nokumavirira, kumaodzanyemba uye rwokumusoro. With ouprofita mufananidzo / Photo: iri, kure uye Jesu ari muBhaibheri nyaya guru "keskusta rwizi" uye mapazi madiki. Tinogona kunyange kuratidza mumwe pane chii chakazoitika pashure pokufa kwaJesu pamuchinjikwa, uye ipapo yokureva "simba hunyambiri" sapamazuva Ezekiel 47. Ona John 19: 33-34: "Asi kana (masoja) akauya kuna Jesu uye zvakaonekwa kuti akanga atofa, havana kuvhuna makumbo ake. Pane vachiomerera mumwe murwi kukwira rutivi rwake nepfumo (obliquely kumusoro uye akarova mwoyo, muzinda Jesu), uye pakarepo kukabuda ropa nemvura. "
Back nouprofita remangwana, Ezekiel 47 vs. 8-9: "Zvino wakati (ngirozi) kuna me'Detta mvura inoyerera ichienda kumabvazuva kwenyika uye runoyerera pasi pamusoro mugwenga, uye ipapo kunze (akafa) gungwa. Mvura dzakapasanura napakati ichayerera (akafa), gungwa, uye mvura anova noutano. Kwose nzizi vachamutswa nowezvipenyu zvose zvinopfakanyika shoals. Uye hove varipo vazhinji kwazvo, nokuti kana mvura iyi anonditangira, mvura inova utano, uye zvose anouya upenyu apo rukova yapera. "The Gungwa Rakafa mufananidzo yemubhaibheri zvavanhu. Patinobvumira Jesu zvinodhura yokuyananisa ropa uye vattendopets yomukati kuchenesa kwacho, kuwana basa matiri kuburikidza noMweya Mutsvene, zvino isu yomuBhaibheri kuponeswa, kuponeswa, mutsvene, uye utano hwakanaka. Tinova vatakuri youpenyu hwokudenga. In "väckelsemötenas" nziyo isati, zvaiva zvakajairika kwokubatana kuti "tsime kutenda" kuti wakamhanya pamusoro pamuchinjiko weKarivari, Somuenzaniso (ona Victory Toner): "Pano itsime runoyerera, akaropafadza iye anowana! Iye yakadzika uye yakajeka, zvakavigwa asi pachena "(246) -". Mwari ruzere nemvura zvakawanda vakadzi nzara uye nevarume. A tsime remvura dzichiuya sezvo inotubuka pamusoro mhenyu "(383) -". A anoshamisa, anoshamisa bhuku ndiko kunobva maronda aJesu. It Unochenura kubva pazvivi zvose, semagada echando ari kugeza rangu. "(524)
The Bible akabata pamwe chete
Ngatiregei vasarudze kubva chokwadi. The Bible kunotibatsira kuramba shoko roruponeso. Zvino akafanana ndakati nguva yokufunga, uye kwete nguva kwete sungisa mubvunzo. Kana tikatora mukati isu guru uye yakadzika - zvebhaibheri / ouprofita - maonero (dzimwe nguva zvakavanzika toga uye nzvimbo mazita, kufambira kuchinja mapoka zviitiko, etc.), zvinhu mikuru kuti tinogona kukunda muvengi vakaisa misungo hunza, yakatarwa tripwires. Hongu, rizere-siyana miedzo. Regai Mweya Mutsvene vachamutswa pamusoro kusabatsira kusatenda! The Bible zvakarurama! Uprofita kuzadziswa! Jesu nguva dzose mhinduro!
Zvinonzi afunge kuverenga pamusoro Maria Magadharena (Johani 20: 11-18), pamusoro wake nazvo pamwechete amuka naJesu mubindu / mumunda kunze pabwiro. - sei iye haana kuziva pakutanga, asi kusuruvara yake vakafunga waiva sangano wacho webindu, "Jesu akati kwaari, 'Kvinna, munochemeiko? Ndiani wamunotsvaka "Akafunga waiva murimi uye akati kwaari: '. Herre, kana iwe mamubvisa, udza kupi vamakaradzika iye, uye ndichabvisa honom' Jesu akati kuna her'Maria .'Then iye akatendeuka akati kwaari nechiHebheru: '! Rabbuni' - zvinoreva mudzidzisi. Jesu akati kwaari: 'Rör ini kwete, nokuti handina kukwira kuna Baba asi. Asi enda kuhama dzangu, uti kwavari: Ndinokwira kuna Baba vangu naBaba venyu, kuna Mwari wangu naMwari wenyu.
The US Vhangeri, uye munyori music, Miles C. Austin (1868-1946), akanyora 1912 rumutsiriro rwiyo: "Mumunda" / "mubindu". Akaita izvi zvose kubva pakaedzwa Mariya Magadharini pamwe amuka Jesu kunze pabwiro, asiwo Miles pachake akauya ruzivo sei kwekanguva uye ndiye akasangana "bindu" - uye yaiva chimwe chinhu "kudzoka" kuna reIdheni raMwari vakadanwa izwi. Uye kuwedzera rwiyo kwaireva kuti vazhinji vakauya kupa upenyu hwavo kuna Jesu vakati vachizvinzwa vakaimba, saka kwakauyawo kushandiswa sezvo dopsång. Moga iwe pinda "bindu" uye ipapo, achifumira mumwe mumvura yorubhabhatidzo / "rwizi" rinotevera - kumusoro pedyo uye munhu kutendeuka kuna Jesu. Nzizi uye kunobva pakutenda muna mumwe.
Pano vhangeri akashandurirwa Swedish na HH 1925: